अध्याय ७८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
काम गर्ने म नै हुँ, कुनै पनि मानव होइन भनेर मैले पहिले नै भनेको छु। मेरो हकमा सबै कुरा ढुक्‍क र खुसी हुन्छन् तर तिमीहरूका हकमा कुराहरू अत्यन्तै फरक हुन्छन्; तिमीहरूले गर्ने हरेक कुरामा चरम कठिनाइ सामना गर्छौ। मैले अनुमोदन गर्ने सबै कुरा म निश्‍चित रूपमा पूरा गर्नेछु; मैले अनुमोदन गर्ने जो-कसैलाई म सिद्ध बनाउनेछु। मानिसहरू हो: मेरो काममा हस्तक्षेप नगर! तिमीहरूले त मैले प्रेम गर्ने कुरालाई प्रेम गर्दै, मैले घृणा गर्ने सबै कुरालाई इन्कार गर्दै, आफूलाई पापबाट मुक्त गर्दै र आफूलाई मेरो मायालु अङ्गालोमा राख्दै मेरो अगुवाइ पछ्याएर काम गर्नुपर्छ। मैले तिमीहरूसँग धाक लगाइरहेको छैनँ, न त बढाइ-चढाइ नै गरिरहेको छु; वास्तवमा यही सत्यता हो। यदि मैले संसारलाई नष्ट गर्नलागेको छु भनेर भन्छु भने, तिमीहरूले आँखा झिमिक्‍क गर्दा संसार खरानीमा परिवर्तन हुनेछ। तिमीहरू प्रायजसो अत्यन्तै व्याकुल हुन्छौ र मेरा वचनहरू रित्तो छन् भनेर डराएको कारण आफ्नो बोझमा थप बोझ थप्छौ। तसर्थ, तिमीहरू मेरो लागि “उम्कने बाटो पत्ता लगाउने” प्रयास गर्दै यताउता दगुर्छौ। अन्धाहरू! मूर्खहरू! तिमीहरूलाई आफ्‍नै मूल्यसमेत थाहा छैन, तैपनि तिमीहरू मेरो सल्‍लाहकार बन्‍ने प्रयास गर्छौ। के तँ योग्य छस्? ऐनामा राम्ररी हेर्!
म तँलाई एउटा कुरा भन्छु! डरपोकहरूलाई तिनीहरूको कातरपनको लागि सजाय दिइनैपर्छ, जब कि अत्यन्तै विश्‍वासयोग्य व्यक्तिले आफ्नो विश्‍वासको कारण आशिषहरू कमाउनेछन्। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्‍वास नै हो। तिमीहरूमाथि आउने आशिषहरूलाई प्रकट गर्नुभन्दा पहिले, तिमीहरूले आफूलाई मेरो निम्ति खर्च गर्न अहिले नै सबै कुरा त्याग गर्नुपर्छ। “आशिषहरू प्राप्त गर्नु” र “सङ्कष्ट भोग्‍नु” ले ठीक यही पक्षलाई जनाउँछन्। मेरा पुत्रहरू! के मेरा वचनहरू अझै पनि तिमीहरूका हृदयमा कुँदिएका छन्? “मेरो लागि इमानदारपूर्वक खर्चिनेहरूलाई म अवश्य नै धेरै आशिष्‌ दिनेछु।” आज, के तैँले भित्री अर्थलाई साँचो रूपमा बुझ्छस्? म खोक्रा शब्‍दहरू बोल्दिनँ; अबदेखि कुनै पनि कुरा लुकाइनेछैन। अर्थात्, मेरा वचनहरूभित्र लुकाइने गरिएका कुराहरू अब तिमीहरूलाई एक-एक गरी, कुनै पनि नलुकाइकन बताइनेछन्। यसको साथै, हरेक वचन मेरो साँचो अर्थ हुनेछ। यसबाहेक, मेरो अघि लुकेका सबै मानिस, घटना र कुरालाई प्रकट गर्ने कार्य सहजै गरिनेछ र त्यो मेरो लागि कुनै पनि हालतमा कठिन हुनेछैन। मैले गर्ने सबै कुरामा मेरो सामान्य मानवताको पक्ष र साथै मेरो पूर्ण ईश्‍वत्वको पक्ष समावेश हुन्छन्। के तैँले यी वचनलाई साँच्‍चै स्पष्ट रूपमा बुझेको छस्? यही कारणले गर्दा म तँलाई तैँले धेरै हतार गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहन्छु। व्यक्ति वा वस्तुलाई प्रकट गर्ने कार्य मेरो लागि कठिन हुँदैन र यसको लागि सधैँ समय हुन्छ। त्यस्तै होइन र? धेरै जना मानिसका साँचो रूप मेरो अघि प्रकट भइसकेका छन्। चाहे तिनीहरू स्यालका आत्मा, कुकुर वा ब्‍वाँसा हुन्, तिनीहरू सबैले आफ्ना साँचो रूप तोकिएको समयमा प्रकट गर्छन्, किनभने मैले गर्ने हरेक कुरा मेरो योजनाको भाग हो। यस विषयमा तिमीहरूसँग पूर्ण रूपमा स्पष्ट बुझाइ हुनैपर्छ!
“समय टाढा छैन” भन्‍ने वाक्यांशले केलाई जनाउँछ भनेर तैँले साँच्‍चै बुझेको छस्? विगतमा, तिमीहरूले सधैँ यसले मेरो दिनलाई जनाउँछ भन्‍ने सोच्थ्यौ, तर तिमीहरू सबैले आफ्‍ना धारणाहरूका आधारमा मेरा वचनहरूको अर्थ लगाइरहेका थियौ। म तिमीहरूलाई भन्छु! अबदेखि, मेरा वचनहरूको गलत अर्थ लगाउने जोकोही व्यक्ति निश्‍चय नै मूर्ख हो! “समय टाढा छैन” भनी मैले बोलेका वचनहरूले आशिषहरूमा रमाउने तिमीहरूका दिनलाई जनाउँछ; अर्थात्, सबै दुष्ट आत्‍मालाई नष्ट गर्ने र मेरो मण्डलीबाट निकाल्‍ने अनि कामकुरा गर्ने सबै मानव तौरतरिकालाई इन्कार गर्ने दिनहरू हुन्‌। यसको साथै, यो अभिव्यक्तिले सबै ठूला-ठूला विपत्तिहरू आइपर्ने दिनहरूलाई जनाउँछ। यो कुरा याद राख! यी सबै ठूला-ठूला विपत्तिहरू हुन्; यसलाई अबदेखि गलत अर्थ नलगाओ। मेरा हातबाट मेरा ठूला-ठूला विपत्तिहरू एकसाथ सम्पूर्ण संसारमा आइपर्नेछन्। मेरो नाम प्राप्त गर्नेहरू आशिषित हुनेछन् र तिनीहरूले त्यस्तो कष्ट अवश्य नै भोग्नुपर्नेछैन। के तिमीहरूलाई अझै यो कुरा याद छ? मैले भनिरहेको कुरा के तिमीहरूले बुझ्यौ? मैले बोल्‍ने समय नै मैले काम गर्न सुरु गर्ने समय हो (जुन बेला ठीक समयमा ठूला-ठूला विपत्तिहरू आइपरेका हुन्छन्)। तिमीहरूले मेरा अभिप्रायहरूलाई साँचो रूपमा बुझ्दैनौ। म तिमीहरूप्रति कुनै पनि उदारता नदेखाइकन किन तिमीहरूसित यस्ता कठोर मागहरू गर्छु के तिमीहरूलाई थाहा छ? अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तनावपूर्ण हुँदा र चीनमा (तथाकथित) शक्तिमा हुनेहरूले सबै तयारी गरिरहेका बेला नै, टाइम बम पड्किन लागेको समय हुन्छ। सात राष्ट्रका मानिसहरू जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनुपरे पनि साँचो मार्गको खोजी गर्न जलद्वारबाट निस्कने पानीजस्तै चीनमा आतुरीका साथ ओइरिनेछन्। कतिलाई मैले चुनेको छु र अरू चाहिँ मेरो सेवा गर्नका लागि हुन्, तर तिनीहरूमाझ कुनै पनि ज्येष्ठ पुत्र छैन। यो काम मेरो हो! यस कुराको सम्झौता मैले संसारको सृष्टि गर्दा नै भएको थियो। तिमीहरूका मानव धारणाहरूलाई त्याग। मैले निरर्थक कुरा बोलिरहेको छु भन्‍ने नठान! म जे सोच्छु त्यो मैले पहिले नै पूरा गरिसकेको हुन्छु र मेरो योजना जे हुन्छ त्यो पनि मैले पहिले नै पूरा गरिसकेको हुन्छु। के यसबारे तिमीहरू स्पष्ट भयौ?
सबै कुरा मेरै विचार र योजनामा निर्भर हुन्छन्। मेरो छोरा! मैले तँलाई तेरै खातिर, साथै मैले प्रेम गर्ने हुनाले चुनेको छु। ज-जसले अवज्ञा गर्ने विचार गर्छ वा डाह गर्छ, त्यो मेरो श्राप र ज्वालाले मर्नेछ। यसमा मेरो राज्यका प्रशासनिक आदेशहरू समावेश छन्, किनभने यस दिनको राज्य पहिले नै स्थापित भइसकेको छ। तैपनि, मेरो छोरा, तँ सतर्क हुनैपर्छ र यसलाई पूँजीको रूपमा लिनु हुँदैन। तिमीहरूले आफ्ना पिताको हृदयलाई बुझ्‍नुपर्छ र यसद्वारा तिमीहरू पिताका परिश्रमी प्रयासहरूप्रति आभारी हुनुपर्छ। यसबाट, मेरो छोराले म कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी प्रेम गर्छु, कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई म दोस्रो रूपमा प्रेम गर्छु, कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई म सबैभन्दा बढी घृणा गर्छु र कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई म घिनाउँछु भन्‍ने कुरा बुझ्नैपर्छ। आफूलाई ज्यादा दबाब नदे। तँसँग जे-जस्तो स्वभाव छ त्यसलाई मैले नै सुनियोजित गरेको थिएँ र त्यो मेरो ईश्‍वरीय स्वभावको एउटा पक्षको प्रकटीकरण हो। तेरो गलतफहमीहरूलाई त्याग्! आफूप्रति घृणा बोकेर नबस्। मैले यो कुरा कसरी भन्‍नुपर्छ? के तैँले अझै पनि बुझिनस्? के तँ अझै पनि तेरा डरहरूको बन्धनमा छस्? को निष्ठावान छ, को जोसिलो छ, को इमानदार छ, को छली छ—मलाई यी सबै थाहा छ, किनभने अघि भनेजस्तै, म सन्तहरूको अवस्थालाई आफ्नो हत्केलालाई जत्तिकै चिन्छु।
मेरो नजरमा, सबै कुरा धेरै पहिले नै पूरा गरिएका र प्रकट गरिएका छन्। (म मानिसहरूको भित्री हृदयलाई छानबिन गर्ने परमेश्‍वर हुँ; मेरो उद्देश्य भनेको मेरो सामान्य मानवताको पक्ष तिमीहरूलाई देखाउनु नै हो।) तैपनि, तिमीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सबै कुरा अझै पनि गुप्त छन् र केही पनि पूरा गरिएको छैन। यो पूर्ण रूपमा तिमीहरूले मलाई चिन्दैनौ भन्‍ने तथ्यको कारणले गर्दा नै हो। सबै कुरा मेरै हातमा छन्, सबै कुरा मेरो खुट्टामुनि छन् र मेरो नजरले सबै कुराको छानबिन गर्छ; मेरो न्यायबाट को उम्कन सक्छ? अशुद्धहरू, कुरा लुकाउनेहरू, मेरो पिठ्यूँपछाडि आलोचना गर्नेहरू, आफ्‍नो हृदयमा विरोध बोक्‍नेहरू र यस्तै यस्तै—मेरो नजरमा बहुमूल्‍य नठानिएका यी सबै मानिसले मेरो अघि घुँडा टेक्नैपर्छ र आफ्‍नो बोझ उतार्नैपर्छ। सायद यो कुरा सुनिसकेपछि, कतिपय मानिस हल्का रूपले उत्प्रेरित हुनेछन् भने अरूले चाहिँ यसलाई गम्‍भीर विषयको रूपमा लिनेछैनन्। म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु! बुद्धिमानले पश्‍चात्ताप गर्न हतार गरून्! यदि तँ मूर्ख होस् भने, प्रतीक्षा मात्रै गर्! जब समय आउँछ, विपत्ति भोग्‍ने को हुनेछ त्यो देख्छस्!
स्वर्ग अझै पनि मूल स्वर्ग हो र पृथ्वी अझै पनि मूल पृथ्वी हो, तर मेरो नजरमा दुवै परिवर्तन भइसकेका छन् अनि पहिलेका स्वर्ग र पृथ्वी होइनन्। स्वर्गले केलाई जनाउँछ? के तिमीहरूलाई थाहा छ? अनि आजको स्वर्गले केलाई जनाउँछ? विगतको स्वर्गले केलाई जनाउँथ्यो? म तिमीहरूलाई यसबारे बताउँछु: विगतको स्वर्गले तिमीहरूले विश्‍वास गर्ने गरेको तर कसैले पनि नदेखेको परमेश्‍वरलाई जनाउँथ्यो र मानिसहरूले सच्‍चा इमानदारीताको साथ विश्‍वास गर्ने परमेश्‍वर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो (किनभने तिनीहरूले उहाँलाई देख्न सकेनन्)। अर्कोतर्फ, आजको स्वर्गले मेरो सामान्य मानवता र मेरो पूर्ण ईश्‍वरत्व दुवैलाई जनाउँछ। अर्थात्, यसले व्यावहारिक परमेश्‍वर स्‍वयम्‌लाई जनाउँछ। दुवै एउटै परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। त्यसोभए, मैले नयाँ स्वर्ग म नै हुँ भनी भन्नुको कारण के हो? यी सबै मानिसका धारणाहरूप्रति निर्देशित छन्। आजको पृथ्वीले तिमीहरू रहेको स्थानलाई जनाउँछ। विगतको पृथ्वीमा एउटै पनि पवित्र स्थान थिएन तर आज तिमीहरू जाने स्थानहरूलाई पवित्र भनी अलग गरिएका छन्। यही कारणले गर्दा म यसलाई नयाँ पृथ्वी भन्छु। यहाँ “नयाँ” भनेको “पवित्र” हो। अहिले नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी पूर्ण रूपमा साकार भइसकेका छन्। के अब तिमीहरूले यो कुरा बुझ्यौ? म तिमीहरूलाई एक-एक गरी सबै रहस्य प्रकट गर्नेछु। हतार नगर र तिमीहरूलाई अझै ठूला-ठूला रहस्यहरू प्रकट गरिनेछन्!
अघिल्लो: अध्याय ७७
अर्को: अध्याय ७९